Ogwe ngwongwo ogige PVC na -ere ahịa na -emepụta ihe na onye na -eweta akpụkpọ ụkwụ | INPVC
Ngwa: Akpụkpọ ụkwụ Upper & Soles
Ntọala guzosiri ike na 1993, otu INPVC bụ otu n'ime ndị nrụpụta ihe mejupụtara PVC na PVC granules na China. Na INPVC, anyị na-enye ọtụtụ pellets PVC nke enwere ike iji rụpụta akwa akpụkpọ ụkwụ dị elu.
Anyị na -enye ihe mkpuchi plastik akpụkpọ ụkwụ PVC n'ụdị nhazi dị iche iche yana usoro pụrụ iche dịka ndị ahịa chọrọ. Anyị nwere teknụzụ dị elu na enyemaka ọkachamara iji wulite ogige ahụ na usoro ọrụ ọkachamara. Ndị otu anyị na -eburu n'uche usoro ọhụụ na ụkpụrụ ụwa niile n'uche anyị wee rụpụta ngwaahịa ya ka o wee mezuo nke ahụ. N'ịbụ ndị na-ebute ndị na-ebubata ngwa ahịa akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ndị na-ebubata ya, anyị na-ekwe nkwa na nnyefe oge ga-abịa n'ọnụ ụzọ gị.
Ogwe kọmpat PVC:
Anyị na-enye ihe na-acha agba na ihe na-acha odo odo nwere ndo na ihe niile nwere ike ime na agba na ọnụahịa dị ọnụ ala. Ụda fluorescent anyị maka akpụkpọ ụkwụ nwere agba na -adọrọ adọrọ.
PVC ikuku ikuku & Ụfụfụed Ogige:
Anyị enweela ihe ịga nke ọma n'ịzụlite ngwakọta ikuku dị arọ nke ikuku nke na-acha tupu agba ma naanị ga-aga n'usoro ịkpụzi iji mepụta ngwaahịa ikpeazụ. Ogwe PVC abụọ na Masterbatch maka akpụkpọ ụkwụ ikuku dị.
Nkịtị PVC (NBR) Ogige:
Site na ịgwakọta roba nitrile (NBR), anyị ekepụtala ogige PVC nwere ihe na -agbanwe agbanwe Njirimara, ejiri maka ime Gumboots & akpụkpọ ụkwụ nchekwa na agba na akụrụngwa niile.
Ngwa Akpụkpọ ụkwụ Uppers & akpụkpọ ụkwụ, Shoes Insole, Akpụkpọ ụkwụ naanị, Rainboots, Gumboots, Wellington akpụkpọ ụkwụ,
Flip Flop akpụkpọ ụkwụ, Foamed Shoes, Pet Shoes, African Shoes, Casual Shoes, Sports Shoes,
Akpụkpọ ụkwụ mmiri ara ehi, akpụkpọ ụkwụ ndị agha, akpụkpọ ụkwụ mmiri ozuzo, ndị na -ese n'elu mmiri, ikiri ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ ụlọ akwụkwọ, akpụkpọ ụkwụ kanvas
Akpụkpọ ụkwụ nchekwa, Ladies Belly, Kids Shoes, Jelly Shoes, Slipper Straps,
Akara ndị na -emegide Antistatic na conductive dị
Na ajụjụ ọ bụla, anyị na-anakọta ihe onye ahịa chọrọ na ngwa, isi ike, agba, ọkwa gburugburu ebe obibi na mgbanwe iji chepụta azịza ngwakọ PVC ahaziri maka gị. Ọ bụrụ na ịnọ na mpaghara nrụpụta akpụkpọ ụkwụ & ihe mejupụtara yana na -achọ ọkachamara na -emepụta PVC Compound, anyị bụ aha anyị ga -echeta.
Nke gara aga: Ogige PVC maka mmepụta akpụkpọ ụkwụ kọmpat na ụfụfụ
Osote: Ogige PVC na -agbanwe agbanwe maka ntụtụ akpụkpọ ụkwụ Pet